1 Mpanjaka 15 - Ny Baiboly
1 Mpanjaka toko 15
Abiama sy Asà mpanjakan'i Jodà - Nadaba sy Baasa mpanjakan'Israely.
1Tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folon'ny nanjakan'i Jeroboama zanak'i Nabata, no nahatongavan'i Abiama ho mpanjakan'i Jodà. 2Ary telo taona no nanjakany teo Jerosalema. Maakà, zanakavavin'i Abesaloma no anaran-dreniny. 3Nandeha tamin'ny fahotan-drainy rehetra, izay nataony teo alohany, izy, ary tsy mba an'ny Tompo, toy ny fon'i Davida rainy, ny fony manontolo. 4Noho ny amin'i Davida anefa, Iaveh Andriamaniny dia nanome fanilo azy tao Jerosalema ihany, fa nanangana ny zanany handimby azy, sady nampaharitra an'i Jerosalema. 5Satria Davida nanao izay mahitsy teo imason'ny Tompo, fa tsy mba nivily tamin'ny didy rehetra azony taminy, nandritra ny andro rehetra niainany, afatsy tamin'ny raharahan'i Oria, Heteana, ihany. 6Niady Roboama sy Jeroboama tamin'ny andro rehetra niainany.
7Ny sisa tamin'ny asan'i Abiama, mbamin'izay rehetra nataony, moa izany va tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'i Jodà? Niady Abiama sy Jeroboama. 8Ary nodimandry any amin'ny razany Abiama, ka nalevina ao an-tanànan'i Davida. Asà zanany lahy no nanjaka nandimby azy.
9Tamin'ny taona faharoapolon'ny nanjakan'i Jeroboama, mpanjakan'Israely, no nahatongavan'i Asà ho mpanjakan'i Jodà. 10Iraika amby efapolo taona no nanjakany tao Jerosalema, ary Maakà, zanakavavin'i Abesaloma no anaran-dreniny.
11Nanao izay mahitsy eo imason'ny Tompo tahaka an'i Davida rainy Asà. 12Nofoanany tamin'ny tany ny manolo-tena ho mpijangajanga, ary nariany avokoa ny sampy nataon-drainy. 13Maakà reniny aza, naongany amin'ny maha-renin'ny mpanjaka azy, satria nanao sampy vetaveta ho an'i Astarte. Nazeran'i Asà ny sampiny vetaveta, dia nodorany teo amin'ny ranon-driaka Sedròna. 14Nefa tsy dia foana ny fitoerana avo, na dia an'ny Tompo aza ny fon'i Asà manontolo, tamin'ny andro rehetra niainany. 15Nampidirany ho eo an-tranon'ny Tompo ny zavatra natokan-drainy sy ny zavatra natokan-tenany, dia volafotsy sy volamena ary kapoaka.
16Niady nandritra ny andro rehetra niainany Asà sy Baasà mpanjakan'Israely. 17Niakatra hamely an'i Jodà Baasà, mpanjakan'Israely, ary nanorina an'i Ramà izy, mba hisakana ny vahoakan'i Asà tsy hahazo mivoaka sy miditra. 18Nalain'i Asà kosa ny volafotsy sy volamena sisa rehetra tao amin'ny rakitry ny tranon'ny Tompo sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka, ka nataony teo an-tanan'ny mpanompony; dia nalefan'ny mpanjaka Asà ireo, ho any amin'i Ben-Hadada zanak'i Tabremona, zanak'i Heziona, mpanjakan'i Siria nonina tao Damasa, hanao hoe: 19Aoka hisy fanekena, toy ny tamin-draiko sy tamin-drainao, amiko sy aminao. Ary indro aho mampanatitra volafotsy sy volamena ho fanomezana ho anao, ka andeha tsoahy ny fanekenao tamin'i Baasà, mpanjakan'Israely, mba hialany aty amiko. 20Dia nohenoin'i Ben-Hadada i Asa mpanjaka, ka nirahiny ny filohan'ny tafiny hamely ny tanànan'Israely, ka noreseny avokoa Ahiona, Danà, Abela-Beta-Maakà, mbamin'ny Kenerota rehetra sy ny tanin'i Neftalì rehetra. 21Nony nandre izany Baasà, dia nitsahatra tsy nanorina an'i Ramà, fa nitoetra tao Tersa izy. 22Ary nasain'i Asà natsoina avokoa i Jodà rehetra, tsy nisy nataony afaka na iray aza, dia nentiny ny vato aman-kazo nanamboaran'i Baasà an'i Ramà, ka izany no nanorenany an'i Gabaan'i Benjamina sy Masfà.
23Ny sisa tamin'ny asa vitan'i Asà, mbamin'ny herim-po nasehony sy izay rehetra nataony ary ny tanàna naoriny, moa izany va tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'i Jodà? Narary tongotra anefa izy nandritra ny andron'ny fahanterany. 24Dia nodimandry any amin'ny razany Asà ka nalevina tao akaikin'ny razany, tao an-tanànan'i Davida. Ary Josafata zanany lahy no nanjaka nandimby azy.
25Tamin'ny taona faharoan'i Asà, mpanjakan'i Jodà, no tonga mpanjakan'Israely Nadaba zanak'i Jeroboama; ary roa taona no nanjakany tamin'Israely. 26Nanao izay ratsy teo imason'ny Tompo izy, fa nandeha tamin'ny làlan-drainy sy tamin'ny fahotan-drainy izay nampanaoviny an'Israely. 27Nanao teti-dratsy nanohitra azy Baasà, zanak'i Ahiasa, amin'ny taranak'Isakara, ka namely azy teo Gebetona izay an'ny Filistina; fa nanao fahirano an'i Gebetona Nadaba sy Israely rehetra tamin'izay. 28Dia matin'i Baasà izy, tamin'ny taona fahatelon'i Asà mpanjakan'i Jodà, ka dia izy no nanjaka nandimby azy. 29Nony tonga mpanjaka izy, dia novonoiny avokoa ny fianakavian'i Jeroboama, ka tsy nasiany niangana rahefa mety ho olona velona koa tamin'ny fianakavian'i Jeroboama, fa naringany daholo araka ny tenin'ny Tompo nolazainy tamin'ny alalan'i Ahiasa mpanompony, avy any Silao, 30noho ny fahotan'i Jeroboama izay nataony sy izay nampanaoviny an'Israely, ka nampahatezerany an'ny Tompo Andriamanitr'Israely tamin'izany.
31Ny sisa tamin'ny asa nataon'i Nadaba mbamin'izay rehetra nataony, moa tsy dia efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tantaran'ny mpanjakan'Israely va izany? 32Niady ihany Asà sy Baasà mpanjakan'Israely tamin'ny andro rehetra niainany.
33Tamin'ny taona fahatelon'i Asà mpanjakan'i Jodà, dia tonga mpanjaka tamin'Israely rehetra tao Tersa kosa Baasà zanak'i Ahiasa, ary efatra amby roapolo taona no nanjakany. 34Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo izy, ary nandeha tamin'ny làlan'i Jeroboama sy tamin'ny fahotana nampanaoviny an'Israely. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2952 seconds